Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa. Fa hoy ny olona: Chapitre 34 1 [Ny nakan’i Sekema an’i Dina sy ny namalian’i Simeona sy Levy izany] Dia nivoaka Dina, zanakavavin’i Lea, izay naterany tamin’i Jakoba, mba hizaha ny zazavavy tompon-tany. Ny sampany telo dia hateloana.
Handeha hiaraka amin’io lehilahy io va ianao? Izany no Esao, rain’ny Edomita. Fa hoy Ilay niteny: Tsaroako izao ny fahadisoako: Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, mqlagasy tsy nisy nahalaza ny heviny tamiko. Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah.
Eny, aoka ho araka ny teninao ary. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao. Raha izao, nahoana re aho no dia mbola velona? Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy.
Aza dia mamono ny ainy isika. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Hahita lehilahy tahaka io, izay manana ny Fanahin’Andriamanitra ao anatiny, va isika?
Malagay nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana.
Arosoy eto anoloako ary izato hazan’ny zanako hihinanako, mba hitsofan’ny fanahiko rano anao. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko malagaay izaho nihady io lavaka fantsakana io.
Tsy malsgasy nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy. Tsy avy amin’Andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao. Iny no tompoko, dia nandray ny fisalobonana Rebeka, ka nisalobonany.
Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy ny osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao. Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao?
Ahoana izao nataonao tamiko izao? Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako.
Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Inona moa no hevitr’ireny antokony rehetra nifanena tamiko ireny?
Ce document au format PDF 1. Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora.
Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Taolako sy nofoko tokoa ianao. Tsy misy fahatahorana an’Andriamanitra tokoa amin’ity tany ity, ka hovonoin’ny olona aho noho ny amin’ny vadiko. Nahoana no nihomehy Saraha ka nanao hoe: Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Anay ny rano; ary ny kalagasy lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo.
Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao. Mankanesa any amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy.